Ander Herrera oo sharaxay farqiga u dhexeeya Ramos iyo Messi ee dhanka hoggaaminta – Gool FM
Ander Herrera oo sharaxay farqiga u dhexeeya Ramos iyo Messi ee dhanka hoggaaminta
(Paris) 24 Dis 2021. Xiddiga kooxda Paris Saint-Germain ee Ander Herrera ayaa isbar-bardhig ku sameeyay doorka hoggaamineed ee uu Sergio Ramos ku dhex leeyahay kooxda, iyo doorka kale ee uu ciyaaray xiddiga reer Argentine ee Lionel Messi.
Herrera ayaa sharaxay in Ramos uu ku tiirsan yahay dhiirogalinta iyo inuu si joogto ah u hago ciyaartoyda, halka Lionel Messi uu sidaas oo kale sameeyo, balse isaga oo aan wax ka badan hadlin waxa uu ku soo bandhigayo garoonka dhexdiisa, isla markaan ay ka go’antahay inuu si weyn diirada u saaro tababarka, inkasta oo wax badan uu ku guuleystay.
Wargeyska Marca ee dalka Spain ayaa wuxuu shaaca ka qaaday wareysi uu bixiyay Ander Herrera, waxaana hadaladiisa ka mid ahaa:
“Intii aan ku guda jiray xirfadeyda, waxaan la kulmay hoggaamiyayaasha afka, sida Sergio Ramos, waxaana jira hoggaamiyayaal tusaale ah sida Messi. Waxa uu ku guulaystay Ballon d’Or-kii todobaad waxana uu qaadanayaa tababarka oo uu ku raaxaysanayo sida inuu haatan bilaabayo in uu ciyaaro, mana uu qaado tallaabo anshaxeed oo kaftan ah.”
Si kastaba ha noqotee, Ander Herrera ayaa beeniyay warar ay qoreen saxaafada oo sheegayay inay kala qeybsanaan cad ay ka jirto qolka labiska kooxda Paris Saint-Germain, isagoo xusay in kooxdu ay tahay mid isku xiran oo wax walba oo la sheego ay yihiin kuwo aan sal iyo raad toona lahayn.
Fabrizio Romano oo shaaca ka qaaday xaqiiqada ah in Paul Pogba uu ka tagayo Manchester United
Wargeys kasoo baxa dalka Spain oo shaaciyay xilliga uu Ousmane Dembele hesiiska cusub u saxiixayo Barcelona iyo sanadaha qandaraaskiisa cusub